Igbe DVD n'ogbe rụọ ọrụ n'ịntanetị Microsoft Office 2021 Ọkachamara maka Onye nrụpụta pc na onye na-ebubata |GK
Ihe nrụ ọrụ dabere na rịbọn na-enye ohere ngwa ngwa na njirimara, ngwa ọrụ na nhazi ya niile dị.Ndị ọrụ nwere ike hazie font, okirikiri nhọrọ ukwuu, nha ụdị n'ime akwụkwọ yana ọtụtụ nkọwa ndị ọzọ.Mepụta akwụkwọ na-atọ ụtọ nke ukwuu n'achụghị arụ ọrụ maka mkpa metụtara ọrụ dị ka ịhazi ozi-e ma ọ bụ imepụta ihe ngosi.
Iji mee ka ọfịs gị rụọ ọrụ nke ọma na ịrụ ọrụ nke ọma, Microsoft na-enye ụdị ọhụrụ nke ngwa ọ bụla etinyere na ụlọ nrụpụta ọrụ Ọfịs 2021.Ngwa ndị a nwere ike inye aka na-edezi akwụkwọ ederede yana ijikwa ọdụ data;ha zuru oke maka akwụkwọ mpịakọta Excel ma ọ bụ ihe ngosi PowerPoint.
Site na Ọkachamara Office 2021 ị ga-enweta ọ bụghị naanị njirimara kachasị ọhụrụ, kamakwa ọrụ niile dabara n'ụdị mkpa ọ bụla - ọrụ siri ike enweghị nsogbu mgbe ị na-arụ ọrụ na Office 2021.
Ka mma gụpụta ụda olu.Olu ọhụrụ, nke emelitere nke ọma site na ederede gaa n'okwu erutela na Okwu 2021. Nwee anụrị olu dị elu, nke nwere nghọta iji nyere gị aka ịghọta akwụkwọ nke ọma.Ee, ọ na-arụkwa ọrụ na Line Focus ọhụrụ na Immersive Reader!
Microsoft Excel 2021 bụ ngwa mgbasa ozi kachasị zuru oke yana dị mfe iji n'ahịa taa.Were nkà nyocha data gị gbagoo nke ọma site na iji atụmatụ ọhụrụ ndị a niile emere naanị maka ndị dị ka onwe gị.
PowerPoint 2021 zuru oke maka ndị chọrọ ịmepụta ihe ngosi na-adọrọ mmasị ma kesaa ha n'ụzọ na-enweta nlebara anya karịa ka ọ dị na mbụ.Site na nkwalite ndị Microsoft n'onwe ha mere yana yana atụmatụ ọhụrụ agbakwunyere - ị nweghị ike ịgahie.
Bụrụ ihe okike, bụrụ ọkachamara.Ihe ngosi kachasị mma bụ ebe ị nwere ike ikwe ka echiche gị na-aga.PowerPoint 2021 na-enye gị ohere ime nke ahụ, mana ọ ka na-ejigide ụda ọkachamara maka ụdị ọnọdụ niile.
PowerPoint 2021 na-eme ka a nụ ya.Ugbu a, ihe ngosi gị nwere ike inwe mmetụta nkeonwe karịa na ndekọ ndekọ sitere na mmemme ahụ n'onwe ya - ọ dịghị mkpa ịchọta ebe mpụga ma ọ bụ tinye oge iji dekọọ onwe gị na ngwa dị iche.
E lekwasịrị anya.Haziri.Na-anabata.
Ozi ịntanetị bụ ọkpụkpụ azụ nke azụmahịa na-aga nke ọma.Ịkwesịrị ka ị na-ahụ ha nke ọma, ma nwee ohere ọbụlagodi mgbe ị na-aga!Outlook 2021 na-akwalite akụkụ niile nke ozi-e gụnyere nhazi, kọntaktị, na mgbakwunye.Ọ dịịrị gị ma ọ bụ ọgbakọ gị mfe karịa ka ọ dị na mbụ iji Outlook 2021 dị nso ndị ahịa ma ọ bụ ndị ọrụ ibe gị.
Echefula maka ịhazi ọgbakọ kwa!Outlook nwere ike inyere gị aka ịhazi nzukọ n'onwe gị, yana ịntanetị site na Skype maka azụmahịa.Jupụta kalenda gị na mmemme na-abịa, oge imecha na ihe ndị ọzọ sitere na otu ngwa dị mfe.
Jikwaa.Jikwaa.Mee ka ọ mee.
Project 2021 bụ ngwá ọrụ zuru oke maka onye na-eme atụmatụ ma ọ bụ onye njikwa ọ bụla kwesịrị iche echiche tupu ha emee ihe na ọrụ ha ma chọọ ịhazi ya.Ọ na-eburu n'uche ọnụego ọrụ gị niile, yana akụrụngwa ekenyere n'ụdị ọrụ ma ọ bụ ọkwa ọrụ nchịkọta.
Kwatuo ọrụ gị na mkpebi ego ọ bụla iji mee njem zuru oke maka ụlọ ọrụ gị.Hụ ihe nzọụkwụ nke ọ bụla ga-eri mgbe ị na-arụ ọrụ n'otu n'otu, yana oge achọrọ kpọmkwem site na ụbọchị mmalite ruo ụbọchị ngwuchara, ma ọ bụ ụbọchị nnyefe ọrụ.
ziri ezi.Chekwaa.Oru oma.
Ngwa mpempe akwụkwọ dị mfe anaghị abụkarị nhọrọ kacha mma ịnye akụkọ azụmaahịa a pụrụ ịdabere na ya.Data ọjọọ, ụkpụrụ oyiri, na ozi efu ma ọ bụ nke na-ekwekọghị ekwekọ nwere ike iduba gị n'ụzọ na-ezighi ezi.Akwụsịla oge na ego iji weghachi ndekọ ndị furu efu wee mezie mmejọ - jiri Access 2021 gbochie mmejọ ka ọ ghara ime.
Nweta 2021 na-echekwa ndekọ gị site na iji usoro nke ya, nke ahụ dabere na Access Jet Engine.Ọ na-ebubata ma ọ bụ jikọọ ozugbo na ngwa ndị ọzọ ebe ozi bara uru si na-azọpụta gị pụọ na nsogbu (na njehie nwere ike ime).Enweghị ntinye data akwụkwọ ntuziaka ọzọ, naanị arụkọ ọrụ na-enweghị ntụpọ.
Nke gara aga: Ụlọ Microsoft Office 2021 na nwa akwụkwọ (PC)
Osote: Ụlọ na azụmaahịa Microsoft ọhụrụ 2019 maka igbe igodo mkpọsa PC